Khabiir Sheegay Sanadaha Ay Al-shabaab dalka sii joogi doonaan | shumis.net
Home » Layaab » Khabiir Sheegay Sanadaha Ay Al-shabaab dalka sii joogi doonaan
Khabiir Sheegay Sanadaha Ay Al-shabaab dalka sii joogi doonaan
Stig Jarle Hansen oo ah Khabiir kasoo jeeda dalka Norway, ayaa sheegay in maleeshiyada Al-shabaab ay awood buuxda u leedahay in dhowr sano oo hadda soo socta sii wadaan weeraro ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka.
Stig Jarle Hansen, waxa uu sheegay in maleeshiyaadka Al-shabaab ay dib usoo laba kacleeyeen taasina ay ka turjumeyso helida Hub iyo dhaqaale ku filan waxa uuna saadaaliyay in 30-sano oo hadda dhiman ay sii jiri karto Al-shabaab.
Wakaalladda Wararka Faransiiska ee AFP, oo xiganeysa Khabiirka ayaa sheegtay in Mr Stig Jarle Hansen uu aaminsan yahay in Qaraxyadii ka dhacay nawaaxiga Hoteel SYL iyo Beerta Nabada ay ahaayen kuwo aan Somalia horay uga dhicin, waxa uuna Stig Jarle Hansen tilmaamay in taasi ay ifafaalo u noqon karto in maleeshiyada ay sii jiri karaan dhowrka sano ee fooda nagu soo heysa.
Stig Jarle Hansen, waxa uu tilmaamay in Qaraxyadii lagu weeraray SYL uu tankiisu ahaa 200 oo Kiilogaram, waxa uuna Qarax noocaasi ah ku sheegay inuu yahay mid loo adeegsaday Kiimiko badan oo aysan horay u heysan jirin Al-shabaab.
Khabiirka waxa uu bidhaamiyay in amaan darida ka taagan gayiga Somalia aysan wax ka qabankarin Ciidamada nabad ilaalinta ee ka socta Midowga Africa, waxa uuna suuragal ku sheegay in iyaga qudhooda ay galaan wakhtiyada soo socda gacan ku ganbad.
Stig Jarle Hansen oo arrintaasi ka hadlaayay ayaa yiri “Ciidamada nabad ilaalinta ee leysku yiraahdo AMISOM waxay ku dhex jiraan Xerooyinka Ciiddanka, isla markaana waxay dibedda u soo baxaan hal mar toddobaadkiiba, iyadoo inta ka hartay Isbuucan ay Al-shabaab wax kasta ugu sarreeyaan”
Stig Jarle Hansen waxa uu meesha ka saaray suuragalnimada in Ciidamada Dowlada Somalia ay si buuxda ula wareegi karaan Gobolada ay hadda ku sugan yihiin Al-qaacidada Somalia.
Dhanka kale, waxa uu bidhaamiyay in arrinkaani kaliya uu hirgali karo Caalamka oo si dhab ah u taageero Somalia.
Title: Khabiir Sheegay Sanadaha Ay Al-shabaab dalka sii joogi doonaan